ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေခါနီး ဖတ်ဖို့။ « လက်တွဲဖော်ချစ်သူ
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေခါနီး ဖတ်ဖို့။
Mar3 by ချစ်သူအတွက်
ဟေ့ ဒီမှာ! မင်းကိုယ်မင်း သတ်သေချင်နေသလား? ဒီစာလေးကို တစ်ချက်တော့ ဖတ်ကြည့်စမ်းပါ။
အရှည်ကြီးမဖတ်နဲ့ ငါးမိနစ်ပဲဖတ်။ ငါးမိနစ်ကျော်ရင် မင်းလုပ်ချင်တာ ဆက်လုပ်၊ ဟုတ်ပလား။
ငါ မင်းကို တရားမချဘူး။ မင်း စိတ်တွေ ပြောင်းလိုက်ပါလို့ မပြောဘူး။
ငါက ဓမ္မကထိကလည်း မဟုတ်ဘူး၊ ဆရာဝန်လည်း မဟုတ်ဘူး။ မင်းခံစားမှုမျိုးကို ထပ်တူ ခံစားဖူးသူတစ်ယောက်ပဲ။
မင်းဘယ်သူလဲ ဆိုတာ ငါမသိဘူး။ ဘာကြောင့် ဒီစာကို ဖတ်နေရလဲလို့လဲ ငါမသိဘူး။ ငါသိတာ တစ်ခုပဲ ရှိတယ်။
အခု မင်း ဒီစာကို ဖတ်နေတယ်၊ အဲဒါကောင်းတယ်။ ဘာလို့ ဖတ်နေရသလဲဆိုတော့ မင့်မှာ ဒုက္ခကြီးတစ်ခုခုရှိနေတယ် ဒါကြောင့်မင်းကိုယ်မင်း သက်သေဖို့ စဉ်းစားနေတယ်၊ ဟုတ်တယ် ဟုတ်။
တကယ်လို့ ဖြစ်နိုင်မယ်သာဆိုရင် အခု မင်းအနားငါ ရှိချင်လိုက်တာ။ မင်းနဲ့အတူ လာထိုင်မယ်၊ စကားတွေ အတူပြောမယ်။ တို့တွေ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ပြီး ရင်ဖွင့်ပြောချင်တယ်။
ဒါပေမဲ့ ငါသိတယ်၊ အဲဒါ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေချင်တဲ့ သူတွေအကြောင်း အများကြီး ငါသိတယ်။ ဒါကြောင့် မင်းဘယ်လိုခံစားနေရသလဲဆိုတာ ငါတပ်အပ်နီးပါး ငါမှန်းလို့ရတယ်။ မင်း စာအရှည်ကြီး မဖတ်ချင်ဘူးဆိုတာလဲ ငါသိတယ်။
တိုတိုပဲ ငါရေးပါ့မယ်။ မင်းနဲ့သာ ငါးမိနစ်လောက် အတူရှိခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ငါ မင်းကို လုပ်စရာလေး ငါးခုပဲ ဝေမျှချင်တာပါ။ မင်းကိုယ်မင်း သတ်သေချင်နေတဲ့ကိစ္စကို ငါမကန့်ကွက်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ မင်း သိပ်နာနာကျင်ကျင် ခံစားနေရာတယ်လို့ ငါယူဆတယ်။
ကောင်းလိုက်တာ။ မင်းဆက်ဖတ်နေတာပဲ။ အရမ်းကောင်းတယ်။ မင်းသာ ဒီစာဆုံးတဲ့အထိ ဆက်ဖတ်ဖြစ်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ။ မင်းရဲ့စိတ်အတွင်းဆုံးပိုင်းထဲမှာ ချီတုံချတုံအတွေးကလေးတစ်ခုတော့ ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ ငါထင်တယ်။
ဒါပေမဲ့ မင်းက မင်းဘ၀ကိုတော့ အဆုံးသတ်တော့မှာပဲနော်။ လူတွေ အဲဒီလို မကြာခဏ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် အဆိုးဆုံးဖြစ်သွားပြီလို့ စိတ်ပျက်သုဉ်းသွားတတ်တာမျိုးလေ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုသေပစ်လိုက်ခြင်းဟာ အရာရာ အိုကေသွားမယ်လို့ မင်းထင်သလား? ပုံမှန်ဆုံးဖြတ်မှုလို့ မင်းထင်သလား? အနည်းဆုံးတော့ အခု မိနစ်ပိုင်းလေးတွေမှာ မင်း ဆက်အသက်ရှင်နေသေးတယ်။ အဲဒါ မင်းမှာ ဒွိဟစိတ်တွေရှိနေသေးတာကိုပြတာပဲ။ မင်းသေချင်နေတဲ့ တစ်ပြိုင်တည်းမှာပဲ မင်းမှာ ဆက်ရှင်သန်ချင်နေသေးတဲ့ စိတ်လည်း ရှိနေတယ်။ ဒါကြောင့် မိနစ်နည်းနည်းလောက် ဆက်သွားကြည့်ရအောင်။
ပထမဆုံး မင်းဒီစာကြောင်းလေးကို စဉ်းစားကြည့်လိုက်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတာဟာ …
ဒါပဲ။ မင်းဟာ လူဆိုးမဟုတ်ဘူး။ အရူးလည်း မဟုတ်ဘူး။ ပျော့ညံတဲ့သူ၊ အရှုံးပေးတတ်တဲ့သူလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဘာလို့လဲ၊ မင်းသေချင်လောက်အောင် ခံစားနေရလို့။
ကဲ … အဲဒါကိုကြည့်စမ်း။ တကယ်တမ်း အမှန်တော့ မင်းသေချင်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မင်းခံနိုင်ရည်ထက်ကျော်လွန်ပြီး နာကျင်ခံစားနေရလို့ပါပဲ။
ငါ မင်းပခုံးပေါ် တပြုံတစ်ခေါင်းကြီး တင်လိုက်ရင် မင်းလဲပြိုကျသွားမယ်၊ မင်းဆက်ရပ်ချင်ချင် မရပ်ချင်ချင်ပေါ့။ စိတ်တန်ခိုးက ဒီနေရာမှာ ဘာမှသုံးစားမရဘူး။
တကယ်ပြောတာ။ မင်းတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင် မင်းကိုယ်မင်း အားတက်အောင်လုပ်မှာပဲ။ ငါသိတယ်။
တခြားသူတွေပြောတာ ဂရုမစိုက်နဲ့။ ခံစားမှုဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တူတာ မဟုတ်ဘူး။ မင်းအတွက် သည်းမခံနိုင်တဲ့ကိစ္စဟာ တခြားတစ်ယောက်အတွက် အရေးမပါတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ။ တခြားတစ်ယောက်သေမလောက်ဖြစ်နေတာမျိုးကို မင်းဖို့ ဟားပစ်လောက်စရာဖြစ်ရင်လဲ ဖြစ်မှာပဲ။ လိုအပ်တာက မင်းရဲ့ ခံနိုင်ရည်အားနဲ့ မမျှအောင် ဘယ်လို ခံစားမှုမျိုး ရောက်လာသလဲဆိုတာပဲ။
မင်းဖို့ မခံမရပ်နိုင်လောက်တဲ့ ဝေဒနာရလာတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်းဟာ ရလာဒ်အဖြစ်ထွက်ပေါ်လာရတော့တာပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတာဟာ မမှားဘူး၊ ဒါပေမဲ့ မမှန်ဘူး။ ဒါဟာ မင်းအကျင့်သိက္ခာချွတ်ယွင်းတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာ ရရှိလာတဲ့ ဝေဒနာနဲ့ မင်းရဲ့ခံနိုင်ရည်တို့ ၀န်နဲ့အား မမျှတာပဲ။
ဒီအချိန်မှာ မင်း လုပ်သင့်တာ ၂မျိုးရှိတယ်။
က) မင်းရဲ့ ဝေဒနာ ဒုက္ခကို လျှော့ပါးစေဖို့ လုပ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်ရင်
ခ) မင်းရဲ့ခံနိုင်ရည်ကို တိုးအောင်လုပ်ပါ။
တကယ်တော့ ၂ခုလုံးကို မင်းလုပ်လို့ ရပါတယ်။
၁) တခြားသူတွေ သူတို့ခံစားခဲ့ရဘူးတဲ့ အရမ်းဆိုးရွားတဲ့ ဒုက္ခဝေဒနာတွေကို ဘယ်လို ကျော်လွှားခဲ့ကြသလဲ? မင်း စူးစမ်းပါ။ အဲဒါ မင်း အသက်ရှင်ဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းပဲ။
ဒါ မင်းကို ကူညီနိုင်မယ်လို့ ငါမျှော်လင့်တယ်။
၂) မင်းကိုယ်မင်း အချိန်အပိုင်းအခြားလေးတစ်ခုတော့ ပေးပါ။ ငါ ဘာတစ်ခုမှ မလုပ်သေးပဲ ၂၄နာရီစောင့်ကြည့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် တစ်ပတ်စောင့်ကြည့်မယ်ပေါ့။ မှတ်ထားစမ်းပါ ခံစားမှုနဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ မတူဘူး၊ တခြားစီ။
အခု မင်းကိုယ်မင်း သတ်သေချင်နေတာဖြစ်တယ်။ အဲဒါ အခု မိနစ်ပိုင်းအတွင်း မင်းလုပ်မှဖြစ်မယ်လို့ ဆိုလိုတာမှ မဟုတ်ပဲ။
မင်းရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေချင်နေတဲ့ ခံစားမှုနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေမယ့်လုပ်ရပ်ကြားမှာ အပိုင်းအခြားလေးတစ်ခုပဲ ထားပေးစမ်းပါ။ ၂၄နာရီလေးပါပဲ။ အခုတောင် ဒီစာဖတ်ရင်း မင်း ငါးမိနစ်လောက် ကျော်လာခဲ့ပြီလေ။
မင်းနောက်ထပ်ငါးမိနစ်ကိုလည်း ဒီစာဆက်ဖတ်နေရင်း ကျော်လွှားသွားနိုင်မှာပဲ။
ဆက်သွားရအောင်ပါ။ ငါနားလည်တယ်။ မင်းကိုယ်မင်း သတ်သေချင်နေတယ်၊ ဒါပေမဲ အဲဒီလုပ်ရပ်ကို မင်းမလုပ်ဖြစ်ဘူး၊ လောလောဆယ် အဲဒီလုပ်ရပ် မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ ငါ ဒီ့အတွက် အားတက်လိုက်တာ။ မင်းအတွက် ငါ မျှော်လင့်ချက်တွေရှိလာပြီ။
၃) လူတွေဘာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေသလဲ? ဝေဒနာခံစားရမှုတွေက `သက်သာ´ ရာရအောင်ဖြစ်တယ်။ မှတ်ထားစမ်းပါ။ သက်သာတယ်ဆိုတာ ခံစားမှုပဲ။ မင်းအသက်ရှင်နေမှ ခံစားလို့ရမယ်။ သေသွားရင် သက်သာတာကို မခံစားနိုင်တော့ဘူး။
၄) တစ်ချို့လူတွေက မင်းကိုယ်မင်းသတ်သေချင်နေတဲ့အကြောင်းသိသွားရင် သိပ်ဆိုးဆိုးရွားရွားတုန့်ပြန်လိမ့်မယ်။ ဘာလို့ဆိုတော့ သူတို့ ကြောက်လို့ ဒေါသထွက်လို့။ အဲဒီအခါမှာ သူတို့ရဲ့ အပြုအမူတွေဟာ မင်းကို ကူညီရာမရောက်ပဲ ဝေဒနာ ပိုတိုးလာအောင်လုပ်သလိုဖြစ်နေတတ်တယ်။
သူတို့ရဲ့ ဆိုးဆိုးရွားရွား တုန့်ပြန်မှုတွေဟာ သူတို့ကြောက်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်နေကြောင်း နားလည်လိုက်ပါကွာ။ မင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူး။
ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့ကျတော့ မိုက်တယ်။ မင်းရဲ့ စိတ်ညစ်စရာအချိန်တွေကို အတူ ဖြတ်သန်းပေးတယ်။ မင်းကို အကဲမဖြတ်ဘူး၊ ခံမငြင်းဘူး၊ ဆေးရုံပို့ဖို့လည်း မလုပ်ဘူး။ မင်းခံစားရတာတွေ ပြောင်းလိုက်ပါလို့လဲ မပြောဘူး။ သူတို့က မင်းကို ဂရုစိုက်ရုံသက်သက်ပဲ။ အဲဒီလို လူစားမျိုးကို မင်းရှာပါ။
အခု။ မင်းရဲ့ ၂၄နာရီ။ ဒါမှမဟုတ် ဖြစ်နိုင်ရင် တစ်ပတ်လောက် မင်းနဲ့အတူ နေပေးဖို့ အဲဒီလို လူမျိုးကို ပြောပါ။ ဒါမှမဟုတ်ရင် မင်းအမေ၊ မင်းအဖွား၊ မင်းရဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း၊ မင်းအဖေ။ မင်းအမ၊ မင်းညီမ၊ မင်း ညီ တစ်ယောက်ယောက်ကတော့ ကူညီနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်။
တစ်ခုလေးပဲ မင်းတစ်ယောက်တည်းတော့ မနေလိုက်ပါနဲ့။ အခန်းလည်းအောင်းမနေနဲ့ အပြင်ထွက်စမ်းပါ။ မင်းဘ၀တလျှောက်လုပ်ချင်ရက်နဲ့ မလုပ်ဝံ့ခဲ့တာတွေ လုပ်ချပစ်လိုက်စမ်းပါ။
၅) ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတဲ့ ခံစားမှုဟာ ပရိဒေ၀မီးပဲ။ အဲဒီခံစားမှုထဲ နစ်ကျွံဝင်သွားတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ အာရုံစိုက်မိတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် မင်းတခြားသူတွေနဲ့ စကားပြောကြည့်စမ်းပါ။ အွန်လိုင်းပေါ်တက် Facebook Group Group တွေထဲ ၀င်ချင်ဝင်။ ချက်တင်ထိုင်ချင်ထိုင်။ မင်းပြောချင်ရာပြောကြည့်။ တစ်ယောက်မဟုတ်တစ်ယောက်တော့ အွန်လိုင်းမှာ ရှိနေလိမ့်မယ်။
အိုကေ။ မင်း ငါ့ကို အချိန် ပေးခဲ့တာပဲ။ ငါဒီ့အတွက် အရမ်းဂုဏ်ယူပါတယ်။
ဒီလိုမင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် မင်းဆုလာဒ်တစ်ခုခံစားရမှာပါ။ ကဲ ငါအခု မင်းကို တန်ဘိုးအကြီးဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခုပေးမယ်။ မင်းယူမလား။
တကယ်ပြောတာ။ ငါပေးမယ့် လက်ဆောင်က မင်းအတွက် တန်ဘိုးအထားဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။ ငါက သိပ်ချမ်းသာလို့ မဟုတ်ဘူးနော်။ ဒါပေမဲ့ သိတယ်မဟုတ်လား၊ ငါက မိုက်တယ်လေ။
ငါပေးမယ့်လက်ဆောင်ကို သိချင်ပြီလား။ မြုံစိစိလုပ်မနေတော့ဘူး။ ပြောချလိုက်တော့မယ်။ အဲဒါ `မင်း´ ပဲ။ ဟုတ်တယ်၊ တကယ်ပြောတာ မင်းအတွက် `မင်း´ ဟာ တန်ဘိုးအကြီးဆုံးလက်ဆောင်ပဲ။
မင်းကိုမင်း လက်ဆောင်အဖြစ် ယူသင့်ပါတယ်ကွာ။
ငါအခု ပြောတာတွေက မင်းအတွက် စိတ်ခံနိုင်ရည်အားကို တက်စေလိမ့်မယ်လို့ ငါယုံတယ်။ အိုကေ ဒီ့အတွက် ငါသိပ်ဝမ်းသာတယ်။
နောက်ထပ် တခြားသူတွေနဲ့ စကားပြောကြည့်ပါဦး။ မင်းပိုပြီး နေသာထိုင်သာ ရှိလာမှာပါ။ မင်းပြောတာကို နားထောင်ပေးမယ့် သူတွေကို ရှာနော်။
တစ်ယောက်ထဲ မရှာနဲ့ အများကြီးရှာ။ မင်းဘယ်လို ခံစားနေရသလဲ မင်းဘာကြောင့် ခံစားနေရသလဲ။ အကုန်လျှောက်ပြောပစ်လိုက်။
ကဲ … လာ၊ ထ
အခုပဲ တစ်ယောက်ယောက်ဆီ ဖုန်းခေါ်လိုက်။
ဒါမှမဟုတ် တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ သွားတွေ့လိုက်။
သွန်းနေစိုး Thorn Nay Soe
This entry was posted in ရင်းတွင်းစာ.
ဒီ ဗိုင်းရပ်(Virus) ကို ဒီလိုသတ်ပါ။ (hahaha Gtalk Virus !!! ) →
ပြောချင်တဲ့စကားလေးတွေ Cancel reply
ဆိုက်စတင်ပြုလုပ်ပါသည်။July 29th, 2011
လာရောက်လည်ပတ် သူများအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်ခင်ဗျာ။
ကိုသူသည် ပညာရှင်တယောက်မဟုတ်ပါ။ ဒီလိုကြိုးစာရှာဖွေသူ တယောက်သာ ဖြစ်ပါသည်။
မိမိComputerတွင်စာဖတ်ချင် သူများအားစာအုပ်များမျှဝေခြင်း ကွန်ပျူတာWindow တင်ခြင်း software တင်ခြင်း Game တင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ MP3/MP4သီချင်းထည့်ခြင်း များပြုလုပ်ပါသည်
kothu1987.magway@gmail.com kothu1987@Yahoo.com, kothu1987@oovoo.com, kothu1987@skype.com kothu1987@aol.com, kothu4567@vzo.chat
ချစ်သူ....... ဘ၀ဆိုတဲ့လောကကြီးမှာ “ရက်.လ.နှစ်”တွေ ရွှေ့လျားနေတာနှင့် အမျှ နင့်ကိုငါသတိရနေခဲ့တာ ဒါ....မုသားမဟုတ်ဘူးနော်....
” စာဖတ်ပါ ”
မည်သူမဆို လူသားတစ်ဦးအနေနှင့် မနက်ထက် ညမှာ ပညာပိုရှိရမည်။ မနေ့ကထက် သည်ကနေ့ ပညာပိုရှိရမည်။ အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ဦးနှောက်အလေးချိန် ပိုစီးလာရမည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက အကြီးမားဆုံးပြစ်မှုကို ကျူးလွန်ရာရောက်သည်။ ဒီအတွက် မည်သို့လုပ်မည်နည်း ............. ????? တစ်နည်းသာရှိသည် " စာဖတ်ပါ "
ကဗျာ ၁ပုဒ်ရှိတယ် ရေးစပ်ထားတဲ. ကဗျာ ၁ပုဒ်ရှိတယ် ဟိုးမှာတွေ.လား နှလုံးသားက စွန်.ပယ်လိုက်တဲံ. ထွက်သက်ဟူသမျှ အောက်ဆီဂျင်ထက်ပေါ. ပါး တိမ်မှာကပ်ထားတယ် နင်ရင်ဘတ်နဲ. ကိုယ်တိုင်ဖတ်ပါ ကွယ်..။။
လစဉ်ချစ်မှတ်တမ်း Select Month November 2014 (1) March 2012 (15) February 2012 (36) January 2012 (100) December 2011 (106) November 2011 (34) October 2011 (56) September 2011 (135) August 2011 (132) July 2011 (27)
အစိုးရဝန်ထမ်းများဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ လစာတိုးမြှင့်
ခေတ်ကုန်နေပေမယ့် အသုံးဝင်နေဆဲ နည်းပညာ(၁၀)ခု
ဒီ ဗိုင်းရပ်(Virus) ကို ဒီလိုသတ်ပါ။ (hahaha Gtalk Virus !!! )
ဘ၀အတွက် အောင်မြင်ဖို့ နည်းလမ်း၁၀ချက်
၂၄ ပစ္စည်း ရုပ်ပြပုံများ
ဘွဲ့ယူဖို့ စောင့်နေတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်
” အချိန် ” အခေါ်အဝေါ်လေးများး
ဖုန်း free ခေါ်ဆိုမယ်
ဘ၀ တွင် ရှုံးနိမ့်ရခြင်း တရားဆယ်ပါး
Windows 1.0 to 8.0 (ယခင် windows နှင့် နောက်ဆုံးပေါ် windows အထိပုံနှင့်တကွ)
ကျွန်တော့် မှာရှိတဲ့ဘလော့ တန်းပလိတ်လေးတွေ
ကိုရီးယားမလေးလို သွယ်လျတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်
2012 အတွက် ၁၀ မြန်မာစာမေးခွန်းလွှာ(ဟာသ)
သင် ပျင်းတဲ့အခါ လုပ်စရာ (၁၀)ခု
တရုတ် တပ်မတော်၏ လေ့ကျင့်သား ပြည့်ဝမှု
ဆန့် ကျင်ဘက်ရဲ့ တန်ဖိုး
သေမိန့် ကျပြီးသူတစ်ဦးနှင့် တွေ့ ဆုံခြင်း
G-Mail အကောင့် ဖောက်နည်း အသစ်
A F*cking Infographic
premium account မလိုပဲနဲ့ Download လုပ်ကြစို့
ADSl Broband wimax အကြောင်းသိကောင်းစရာ
Mobile Phone Software Download Websites
နေ့ စU်သွားလာ လှု ပ်ရှားမှု တွင်ပြင်ဆင်သတိ ပြု့ ရမည့် Aချက် များ။
ဂျာနယ်ဆိုင်ရာ Website များ
Free email ဆိုင်ရာ Website များ
အလှအပဆိုင်ရာ Website များ
ဗုဓ္ဒဘာသာဝင်များအတွက် ဘာသာရေး Website များ
ခရစ်ယန် ဓမ္မ Website များ
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် နေ၏ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ
အလှ မြန်မာ့ ပန်းချီ
ဖုန်း နဲ့ ကြက် ဥ ပြုတ် နည်း
ကျပ် ၅၀၀၀ တန်ဖုန်း
IDM မှာ Downloading
အချစ်ဆိုတာကို အတိအကျ မသိပဲနဲ့
IP Address နဲ့ Web Page ဖွင့်ကြည့်မယ်
ရန်ကုန်မြို့ ရဲ့ရှေးကျ ရှားပါးသော ဓာတ်ပုံများ
မြန်မာ့ အလှ မြန်မာ့ ပန်းချီ
အားရပါးရ ရယ်ချင်ရင် ဒါလေးဖတ်လိုက်
လူတယောက်က သူကိုယ်တိုင် သူ့အဘိုးပြန်ဖြစ်နေခြင်း
အရေးကြီးဆုံးအချိန် "ဘဝတစ်ခုရဲ့ အရေးကြီးဆုံး အချိန်ဟာ ဘဝနေဝင်ချိန် (သေဆုံးခါနီး)ပဲလို့ လူတိုင်း သိနေပေမယ့် အမှန်တကယ်တော့ ယခု သင်စာဖတ်နေတဲ့ ဖြစ်ဆဲခဏ အချိန်လေးသာ သင့်ဘဝရဲ့ အရေးကြီးဆုံး အချိန်ဖြစ်ပါတယ်..." အသုံးချတတ်ပါစေ "လူ့ဘ၀ တစ်ခုရဲ့ အချိန်ဟာ အလွန်တိုတောင်းလွန်းလှပါတယ်၊ တိုတောင်းလှတဲ့ ဘ၀ကို သာယာမှု၊ စိတ်ဆိုးမှု စတာတွေနဲ့ အချိန်မကုန်သင့်ဘူး၊ လူသားတိုင်း မိမိဘ၀ရဲ့ အချိန်ကို တန်ဖိုးရှိစွာ ကုန်လွန်ပါစေ..."
အပင်မြင့်ရင်လေတိုက်ခံရမှာစိုးလို့ ကန်ဇွန်းဥလိုမြေကြီးထဲနေပါတယ်ဆိုမှ လာလာပြီးဆွနေကြတယ်
email လိပ်စာထည့်ပြီးလျှင် Subscribe ကို နှိပ်ပါ
ပေးထားသည့် code နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပြီး Complete subscription Request ကို နှိပ်ပါ.
Feedburner မှ သင့်ထံမေးလ်ပို့ပေးပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါမေးလ်ကိုဖွင့်ပြီး အပြာရောင် Activate Link ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Email Subscription Confirmed! လို့ အတည်ပြုပြီးတဲ့ စာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒါဆိုရင် ဒီ website တွင်အသစ်ရေးသမျှကို လာကြည့်စရာမလိုပဲ မေးလ်ထဲကိုချက်ချင်းပို့ပေးပါမည်။
သမ္ဗုဒ္ဓေ အဌ၀ီသဉ္စ ဒွါဒသဉ္စ သဟသာကေ ပဉ္စသတ သဟသာနိ နမာမိ သိရသာမဟံ အပါယ်ကာ ၀ါဠုကာ ဂဂ်ါ နေန္တာ နိဗ္ဗုတာ ဇိနာ တေသံ ဓမ္မဉ္စ သံဃဉ္စ အာဒရေန နာမာမဟံ နာမက္ကာရာ နုဘာဝေန ဟိတွာ သဗ္ဗေ ဥပဒ္ဒဝေ အနေက အန္တရာ ယာပိ ၀ိနသန္တု အသေသတော....။
address text android cars gadgets ip address microsoft technology transportation
အချစ်တစ်မျိုးရှိတယ်... အရမ်းချစ်နေရက်နဲ့ အဲဒီအချစ်ကို လှပပြည့်စုံအောင် မထုတ်ဖော်ပြတတ်ဘူး။ အချစ်တစ်မျိုးရှိတယ်... လက်လွတ်ရမယ်မှန်းသိနေရက်နဲ့ အဲဒီအချစ်နားက မခွဲနိုင်မခွာရက်ဖြစ်ရတယ်။
စိတ်ချမ်းသာချင်သလား မလိုချင်ပါနဲ့၊ ပေးချင်စိတ်ပဲမွေးပါ သင်ဟာတက်နိုင်သူဆိုခဲ့ရင်လည်းဖြန့်ဝေပေးကမ်းခြင်းဖြင့်စိတ်ချမ်းသာမူ့ရယူပါ။ မျှော်လင့်တောင့်တပြီးအပင်ပန်းမခံပါနဲ့။
*.˛.°★。˛°.★**SwEeT DeCeMbeR *★* *˛.
မြန်မာဘလော့ဂ် အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲ ကျင်းပမည်
ယခုနှစ် ၂၀၁၁ခုနှစ်အတွက် ချီးမြှင့်မည့် မြန်မာဘလော့ဂ် အကယ်ဒမီဆုများတွင် အကောင်းဆုံး ဘလော့ဂ်ဆု ( ကဗျာ )၊ အကောင်းဆုံး ဘလော့ဂ်ဆု ( နည်းပညာ )၊ အကောင်းဆုံး ဘလော့ဂ်ဆု ( ပညာရေး )၊ အကောင်းဆုံး ဘလော့ဂ်ဆု ( ဘာသာရေး )၊ အကောင်းဆုံး ဘလော့ဂ်ဆု ( ရသ စာပေ )၊ အကောင်းဆုံး ဘလော့ဂ်ဆု ( သတင်း )၊ အကောင်းဆုံး ဘလော့ဂ်ဆု ( အစုအဖွဲ့ )၊ အကောင်းဆုံး ဘလော့ဂ်ဆု ( မြန်မာ စာပေ )၊ အကောင်းဆုံး ဘလော့ဂ်ဆု ( နိုင်ငံရေး )၊ အကောင်းဆုံး ဘလော့ဂ်ဆု ( ပရဟိတ )၊ အကောင်းဆုံး ဘလော့ဂ်ဆု ( အထွေထွေ )၊
Uncategorized ကျန်းမာရေး နည်းပညာ ဗဟုသုတ ရင်းတွင်းစာ ဟာသလေးများ
* သင့်အသက်တွေ ကြီးနေပြီ၊ လောဘ-ဒေါသ-မောဟတွေ ကြီးနေတုန်းပဲလား။ * သင့်သွားတွေ ကျိုးနေပြီ၊ မာန်မာနတွေ မကျိုးသေးဘူးလား။ * သင့်အသားတွေ တွန့်နေပြီ၊ မကောင်းမှုမှာ မတွန့်သေးဘူးလား။ * သင့်အင်အားတွေ လျော့ပါးနေပြီ၊ သင့်တဏှာဆန္ဒတွေ မလျော့သေးဘူးလား။ * သင့်ဆံပင်တွေ ဖြူကုန်ပြီ၊ သင့်စိတ်တွေ မဖြူသေးဘူးလား။ * သင့်မျက်စိတွေ မှုန်ဝါးနေပြီ၊ သင့်နိဗ္ဗာန်လမ်းရော မှုန်ဝါးနေတုန်းပဲလား။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာပဲ ချစ်နေရုံနဲ့တော့ ငါ့ ဘ၀ အချိန်ကုန်တာပဲ အဖတ်တင်လိမ့်မယ် မပျံသန်းနိုင်တဲ့ ငှက်လို့ ပြောတိုင်း ပင်းဂွင်းငှက်ကို ပြေးမြင်မိရင် နင့်ကို ငါ မခေါ်ချင်ဘူး ယောက္ခမကြိး ဖတ်ဖို့ ရေးတဲ့စာမဟုတ်လို့ အွန်လိုင်းပေါ်ရောက်နေတဲ့ ကောင်မလေး ဖတ်စေချင်တာ ငါ့စေတနာပါ နင့် နှလုံးသားကို အရင် ဖုံးခေါ်ပါ ပြီးမှ ငါ့ကို စာပြန်ပါ..........
ISP: MYANMA POST AND TELECOMMUNICATION
Time Zone: UTC +06:30
Net Speed: DSL
Daily Premium Accounts ယူရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ